Zive ngathi nguSultan! MiniAlhambra uCarmen de Omar
Indlu esemaphandleni yonke sinombuki zindwendwe onguYolanda
Konwabele ukuhlala kule Alhambra incinci, imizuzu eli-15 ukusuka kwikomkhulu laseGranada, kwindawo yendalo yaseHuetor Santillán
UEl Carmen de Omar yindlu enomgangatho omnye. Inepatio entle yangaphakathi evaliweyo enechibi leentlanzi, ejikelezileyo kukho amagumbi okulala, igumbi lokuhlala elikhulu kunye nekhitshi. Inamagumbi okulala amathathu anebhedi ephindwe kabini.
Elinye lamagumbi, iSultan, linegumbi lokuhlala elincinci elinendawo yomlilo kunye negumbi lalo lokuhlambela. Amanye amagumbi amabini ajongene nechibi, abelana ngelinye igumbi lokuhlambela. Ikwanayo negumbi lokuhlambela lesithathu elivula kwipatio yangaphakathi encinci enomthombo omncinci kunye nokufikelela ekhitshini nakwigumbi lokuhlambela. Ikhitshi yenziwe ngethayile yaseGranada. Igumbi lokuhlala elikhulu lesitayela saseGranada lilawulwa yindawo yomlilo, kunye neesofa ezikhululekile kunye nezihlalo zokuphumla zokuphumla kunye netafile yabantu abayi-6.
ICarmen yethu inetayile enkulu, enesitya kunye nemithombo emibini emincinci enejethi. Imiyezo yaseCarmen inika umthunzi novuyo lwamehlo neendlebe ngenxa yemithombo nemithi emikhulu.
Ngaphezulu kwewaka leemitha zomphakamo kunye nophawu lwentaba, uHúetor Santillán uqhayisa ngendalo entle. Umhlaba wayo uyinxalenye yeSierra de Húetor Natural Park, efihla umthombo wemilambo yaseDarro kunye neFardes.
Umbuki zindwendwe ngu- Yolanda
Me enamoré del Carmen de Omar desde el primer día que lo vi... deseo ofrecer este mágico alojamiento a los visitantes de Granada para que se sientan como en la Alhambra.
Iyafumaneka ukuze uphendule imibuzo ngefowuni okanye kuWhatsApp
Inombolo yomthetho: CTC-2018122866